Rongedza mafoto ako ezororo neFilterra | IPhone nhau
Isu tinoramba tichitenderedza iyo iOS App Store kuti tione kana chimwe chinhu chinonakidza chichiuya. Ino nguva isu tawana yakanyatso kukwana photos yekugadzirisa application yatiri kuda kugovana newe. NeFilterra iwe unozokwanisa kugadzirisa nenzira inonakidza kwazvo mifananidzo iyo iwe yawakakwanisa kutora mukati memazororo eKrisimasi, kunyangwe wanga uri kumahombekombe kana kuti wanga uri mumakomo. Tichazotsanangura zvishoma zvinoita kuti Filterra ive yakasiyana, uye nei zvingave zvinonakidza kurodha iyi yemahara yekugadzirisa foto application pane iyo App Store.
Chekutanga pane zvese isu tichazonyengerwa nemashoko evakagadziri:
Sangana naFilterra, iyo yega pa-iyo-iyo-pikicha pikicha iyo inokutendera iwe kunatsiridza mifananidzo yako pese paunoda.
Wongorora yavo muunganidzwa weakasarudzika, anotevera-chizvarwa mafirita, maturusi, uye mhedzisiro izvo zvinoita kuti kugona kwako kumhanye musango uye kuti mapikicha ako aite senge zvisati zvamboitika!
Tamba nezvose zvasarudzo uye mikana iyo inobvumidza iwe kuti ushandise kuwanda kwekuvandudza uye nemhando dzese dzekuwedzera kumifananidzo yako.
Iko kunyorera kuri mahara uye kwakazara zvakakwana, inobata isingasviki 105 MB, asi haina zvirinyore kurodha kwese kwese, sevamwe. Ichokwadi kuti i "yemahara", sezvo ichipa zvemukati meapp izvo zvatinofanira kubhadhara zvakasiyana., asi kwete yakawandisa kana kudzivirira kudzivirira kwayo.
Tinogona kugadzira zvinonamirwa nekukurumidza, mifananidzo inozotaridza semakatuni, zvitambi uye zvirevo zvemitsara zvinoenderana nemifananidzo yedu kuratidza zvatinonzwa. Chinhu chakakosha ndechekuti iri intuitive, uye ndizvo. Yakawana yakawanda yakanaka ongororo pane iyo iOS App Store uye izvozvi ese mafirita uye ekunamatira mapakeji anoiswa semahara, kunyangwe isu tisingazive kuti achatora nguva yakareba sei. Ehezve, usakanganwa kuti yakabatanidza kushambadzira, iyo inogona kukonzeresa kushushikana kana uchiishandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Rongedza mafoto ako ezororo neFilterra
Iyo iPhone 7 inotitaridza mumufananidzo kuti kupera kwegore kwaive kutenderera pasirese